मोटोपनाका प्रमुख कारणहरु यस्ता छन्, धेरै रोगहरुको कारण मोटोपना !! – News Nepali Dainik
मोटोपनाका प्रमुख कारणहरु यस्ता छन्, धेरै रोगहरुको कारण मोटोपना !!
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०७, २०७७ समय: ९:२२:४४
कुनै व्यक्ति धेरै खाना खान्छ तर प्रयाप्त शारीरिक गतिविधि गर्दैन भने, खानाबाट प्राप्त क्यालोरी खर्च नभएर बोसोको रुपमा शरीरमा जम्मा हुन थाल्छ । यस्तो भएमा मोटोपना हुन थाल्छ । मोटोपना धेरै रोगहरुको कारण हुनसक्छ । बैज्ञानिक तथ्यहरुको आधारमा मोटोपनालाई आजभोलि एउटा रोग नै मानिन थालिएको छ । मोटोपनाले उच्च रक्तचाप,मधुमेह, र उच्च कोलेस्ट्रोल जस्ता रिस्क फैक्टर्सहरुको सृजना गरेर ह्दयाघात र मस्तिष्कघात जस्ता प्राणघातक रोगहरु निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले खानपिन सहितको जीवनशैलीमा परिवर्तन गरी तौल घटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
मोटोपनाका विविध कारणहरुमध्ये अस्वस्थ आहारको अत्यधिक सेवन र शारीरिक गतिविधिमा कमी नै प्रमुख हुन् । प्रशस्त मात्रामा खाना खाने तर शारीरिक गतिविधि कम गर्ने भएमा हाम्रो शरीरमा खानाबाट प्राप्त हुने क्यालोरी बोसोको रुपमा जम्मा हुनथाल्छ । बोसो विशेष गरेर छालामुनि र पेटमा जम्मा हुन्छ । गुलियो र चिल्लो खानामा क्यालोरी बढी हुने भएकोले यस्तो खाना खानेहरुलाई मोटोपना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । खानपिन बाहेक वंशानुगत कारणले पनि मोटोपना निम्त्याउन सक्छ । कहिलेकाही थाइराइड हार्मोनको कमीले पनि मोटोपना हुनसक्छ ।
Last Updated on: March 20th, 2021 at 9:22 am